मोडेल गौतमको मृत्युको घटनाले लियो नयाँ मोड! परिवारकै मौनता रहस्यम, डायरीमा यस्तो लेखेको भेटियो – Dailny NpNews
मोडेल गौतमको मृत्युको घटनाले लियो नयाँ मोड! परिवारकै मौनता रहस्यम, डायरीमा यस्तो लेखेको भेटियो
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ १६, २०७८ समय: २२:४५:०३
एजेन्सी । लामो समय देखि मोडलिगं पेशालाई आफ्नो भविष्य बनाइरहेकी २४ वर्षकी प्रिया गौतम भारतको ग्रेटर नोएडा वेस्टको प्यारामाउन्ट इमोशन्स सोसाइटीको १४ औं तलाबाट ख सेर निधन भयो । उनी मुम्बईमा मोडलको काम गर्थिन । उनको परिवारले घटनामा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । प्रहरीमा उजुरी पनि परेको छैन ।
त्यहि समयमा पुलिसको हातमा एउटा डायरी भेटिएको छ जसमा प्रियाले लेखेका थिए ‘म सर्वश्रेष्ठ हुँ, म धेरै नै धनी हुने छु।’ यद्यपि उनले यी सबै किन र कहिले लेखिन् भन्ने कुरा थाहा छैन। तर यो स्पष्ट छ कि ऊनी आफ्नो भविष्यको बारेमा धेरै आशावादी थिइन् ।
जानकारीका अनुसार, मुम्बईका एक साथी उनलाई भेट्न आएका थिए । तर उनको परिवारले केटा साथी भेट्न बोलाएको भनेर विरोध जनाए । त्यसपछि उनका केटा साथि फर्किएर गए । उनले धेरै पटक ति साथीलाई फर्काउन फोन गरिरहिन् । रिसाएर गएका उनका साथीले फोन उठाएनन् । त्यसपछि उनी १४ तलावाट ख से की हुन् ।
यो घटना उनी स्वयंले गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रिया मूल रूपमा दिल्ली मयूर विहार फेज का निवासी थियन् । उनी आफ्नो दिदी प्रियंका र भिनाजु बस्दै आएको घरमा उनीहरुलाई भेट्न पुगेकी थिइन् । त्यही बेलामा उनले केटा साथीलाई पनि बोलाएकी थिइन् ।
यस बखत उनका एक साथी पनि प्रियालाई भेट्न मुम्बई आएका थिए। तर परिवारले प्रियाको साथीलाई यस्तो बोलाएको मन परेन। एसीपी योगेन्द्र सिंहले भने कि परिवारका सदस्यले यस विषयमा कुनै उजुरी गरेनन। प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोडेलले आफै यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने देखिएको छ ।